🎣 Ukudoba | Vakashela i-Hultsfred
Usuku lokudoba olungenamoya emanzini, imisebe yelanga ifudumele… impela inhlanzi emnandi? Ukuhlinzekwa kwamanzi okudoba ukudoba akupheli futhi umehluko mkhulu kumasipala wethu. Nazi i-perch, i-pikeperch, i-pike, i-carp ne-tench ukubala okumbalwa. Thola indawo oyithandayo yokudoba futhi uzwe ukusabalala okuzolile emzimbeni wakho ngenkathi ulinde i-pacifier!
Ukudoba ehlane emanzini agelezayo. Usayizi weLake Ukujula okuphezulu okulingene Okuphakathi kwezinhlobo zezinhlanzi iPherch Pike Sutare Benlöja Lake
I-Oppbjärken iyichibi lehlathi elijulile elinamanzi angenamsoco futhi ahlanzekile. Ichibi lisendaweni engamakhilomitha ambalwa empumalanga yeHultsfred, eningizimu nedolobhana lase-Fallhult. Cishe
Lo mama ungomunye wamachibi amane iVirserums SFK aqashisa ngawo futhi aqasha kuwo ukudoba. Amanye yiMistersjö, Lysegöl ne-Ånglegöl. Iqembu liyathengisa
IDjupsjön ichibi elincane futhi elijulile elisentshonalanga neHultsfred. Ichibi liyingxenye ye-FVO kaStora Hammarsjön. I-SFK Kroken ibheka ngaphezulu kwendawo
IBysjön itholakala cishe ku-15 km eningizimu-ntshonalanga yeHultsfred. IBysjön ingenye yamachibi ayingxenye yeFlatens Fiskevårdsområde ohlelweni lwamanzi lukaGårdvedaån. Uzothola
Ichibi elikhulu kunawo wonke endaweni yasechibi i-Great Hammar - ichibi elihle elinenani eliphakeme lokudoba kwezemidlalo namathuba amahle okuthuthuka. IStora Hammarsjön iyichibi langempela lehlane futhi lincane
IHesjön ingelinye lamachibi angaba ngu-20 ayingxenye ye-FVO kaStora Hammarsjön. Indawo iyaqashiswa futhi iphethwe yi-SFK Kroken eHultsfred. KU-IN
I-Alegöl noma i-Ålegöl, njengoba isho kumamephu, amanzi anothingo oluhle. I-Gölen itholakala cishe ngamakhilomitha angu-5 eningizimu ye-Hultsfred futhi kuya
IVälen itholakala maphakathi ne-Stora Hammarsjön's FVO, cishe amakhilomitha ayi-7 eningizimu-ntshonalanga yeHultsfred. Ichibi liphethwe yi-SFK Kroken, elilikhipha njalo
Ichibi le-carp elinohlamvu lwasehlane. QAPHELA: Ungakwazi kuphela ukudoba echibini njengelungu le-SFK Kroken. IStockebrogöl itholakala empumalanga yeStora Hammarsjön,
I-lenglegöl itholakala phakathi kweMålilla neVirserum, eceleni komgwaqo 23. Ichibi lingesinye sezibonelo ezinhle zendlela yokwenza into ekhangayo
ILysegöl iyichibi eliyindilinga elisehlathini laseSmåland. IGölen itholakala eningizimu yeVirserum khona kanye nomgwaqo 23. Amanzi abhalwe uphawu
IVirserumssjön ichibi elijulile futhi elingenamsoco eliseduze nomphakathi waseVirserum. Ichibi nezindawo zasemakhaya zinhle futhi ziningi ezinganikeza izivakashi ezungeze ukudoba kwezemidlalo,
IJärnsjön itholakala ngasentshonalanga yeJärnforsen futhi yehlukaniswa ngu-Emån. Ichibi liyingxenye ye-FVO kaJärnforsen. Ichibi elincane elingashoni kanye nendawo ezungezile
IMelsjön iyichibi elincane elingashoni futhi amanzi anwebisa iGårdvedaån. Itholakala enyakatho yeLake Flaten entshonalanga neMålilla futhi
IFlaten iyichibi elidumile lokudoba ezemidlalo, hhayi nje izivakashi zakwamanye amazwe zokudoba ezemidlalo. Itholakala cishe ngamakhilomitha ayi-15 eningizimu-ntshonalanga yeHultsfred eduze komgwaqo ophakathi kweMaililla ne
ISkiren ichibi elincane futhi elingashoni eliyingxenye yohlelo lwamanzi lweFlatens FVO noGårdvedaån. I-Flatens FVO ifaka amachibi i-Garpen, i-Skiren, i-revre Vrången,
I-revre Vrången iyingxenye yeFlatens Fiskevårdsområde. Ichibi lisenyakatho-mpumalanga yeVirserum. Kuyichibi lasehlathini elinotshani obuncane ngaphandle kokujula ngaphakathi kubo
Emån, Nyboholm kuya eKlövdala
Ubude obuphelele buka-Emån bungamakhilomitha angama-22. Umfula uqala kumasipala waseNässjö bese ugelezela olwandle emngceleni ophakathi kwe-Oskarshamns- neMönsterås